Afaka mahazo torohevitra avy amin'ny manam-pahaizana Amazon ve aho?
Ny ankamaroantsika (tsy lazain'ny manam-pahaizana rehetra momba ny lisitra Amazon) dia mahafantatra fa ity tsena tena feno aterineto ity dia tena fitaovana goavam-be. Ary ny zava-misy dia i Amazon no mety ho toerana lehibe indrindra amin'io karazana manokana io izay hita ao amin'ny tranonkala. Midika izany fa ny habetsaky ny fifaninanana ara-barotra dia tena henjana sy mahery setra any. Noho izany, ahoana ny fomba hialana amin'ny toe-draharaha tsy misy firy manapaka ny tsena Amazon amin'ny aterineto? Eny, inoako fa ny fanalahidin'ny fahombiazan'ny ara-barotra amin'ny Amazon dia mivantana mivantana ao amin'ny lisitry ny fanamafisana ny lisitry ny fanalahidy havanana mba ahafahanao manana fitetezana tsara kokoa amin'ny aterineto amin'ny fikarohana ao. Ary etsy ambany dia misy fanambarana mety sy hevitra henjana avy amin'ny manam-pahaizana Amazon ao amin'ny lisitra ho anao mba handroahana ny pejy fanavaozana anao amin'ny sehatra vaovao.
Optimization Tips & Tricks avy amin'ny Amazon Listing Expert
Voalohany indrindra, avelao hiatrika izany - ny lisitry ny fanatsarana ny vokatra dia dingana mbola mitranga izay mety tsy ho tonga mihitsy hatramin'ny farany - umzugsreinigung zuerich guenstig. Midika izany fa ny mpizara Amazon Best Sellers sy ny vokatra iraisana amin'ny famolavolana ny vokatra dia miorina amin'ny fampisehoana ara-barotra ankapobeny, miaraka amin'ny fomba tsara indrindra amin'ny lisitry ny vokatra lisitra ho an'ny fikarohana. Ary ny zava-drehetra dia ny fanavaozana ny kajikajy voalohany dia mivoatra hatrany mba hivoahana amin'ny ora ora ary maneho ny fivarotana farany farany amin'ny vokatra rehetra amidy any. Ary ireto misy toro-hevitra sy toro-hevitra tena ilaina ho fantatra fa tsy ny manam-pahaizana rehetra momba ny lisitry ny Amazon, fa ny mpandraharaha manerantany rehetra izay manolotra izay karazana zavatra amidy. Noho izany, ity no tokony ho fantatrao momba ny fanamafisana ny lisitry Amazon amin'ny lisitra, amin'ny teny fohy.
Nalaina tamin'ny ankapobeny, manana zavatra manodidina karazana 50 ianao mba hamenoana ireo saha dimy tianao rehetra. Ary ny zava-manahirana indrindra eto dia ny fampiasana ireo toetra amam-pahendrena ireo amim-pahendrena ary manao izay tsara indrindra vitanao mba hamoronana endritsoratra maro be tsy tapaka toy ny azo atao.
Ny fikarohana manokana (tsy filazana)
. Mariho anefa, fa ny dingana iray amin'ny lalao marina dia misy ihany koa lanjany matanjaka indrindra (mifototra amin'ny toro-làlana ofisialy ofisialin'ny Amazon).
Indreto ny antony hafa mahery vaika (ankoatra ny tsipika momba ny fangatahana an-tsoratra) raha jerena ny algorithm amin'ny alàlan'ny karazam-pikarohana A9:
1. ny fivarotana ankapobeny;
2. ny fivoaran'ny fivarotana farany indrindra (isam-bolana, isan-kerinandro, sns. );
3. vokatra sy fifantenana vokatra mahaliana;
Long-tailed Search Terms
Aza fandaniam-potoana sy ezaka amin'ny fanavaozana ny teny fohy na ny fikarohana manokana izay efa tafiditra ao amin'ny lohateninao, ary koa ny lisitra amin'ny teboka bullet ao amin'ny pejin-dry zareo.
Aza misalasala mandinika ny dikanteny mitovy sy ny sokajy samihafa LSI samihafa, izay azo ampiasaina amin'ny mpivarotra vitsivitsy mitady ny vokatra mitovy.
Tsara kokoa ianao raha tsy mampiasa marika famerenana, amin'ny ankapobeny satria ity dia hanapaka ny habeo efa voafetra ho an'ny fizarana pejy rehetra.
Aza manelingelina ny endriky ny mari-pamantarana, tokana / maro, ary koa ireo fiovana hafa mitovy amin'izany - Ny Amazon dia milaza fa tsy ilaina ny ezaka tahaka izany, satria ny motera fikarohan-dry zareo dia mitovy amin'ny fomba mitovy amin'izany.